ထီပေါက်နည်းနှင့် ထီပေါက် ကျင့်စဉ်
တစ်ခုသော တနင်္ဂနွေနေ့ တွင် ကျွန်တော့်အိမ်သို့ အမြဲ လာလည်နေကျ ဖြစ်သော ညီအရင်းတစ်မျှ ခင်မင်ရသည့် မောင်ဝေလင်း ရောက်လာပြီး။ ** အစ်ကို ဘာစာအုပ...
အင်း အဆိုတော် သဇင်တစ်ယောက်တော့ ခုရက်ပိုင်း နာမည်ကြီးရချည်သေးရဲ့ :D
သူ သဇင် လား ????
သီတင်းကျွတ် ကာလ လူငယ်အတွေး စိတ်ကူးပုံရိပ်နှင့် လွှမ်းပိုင် ထက်ထက် (Bobby Soxer)
မြန်မာ့ ယဉ်ကျေးမှု အနှစ်သာရ ပွဲတော်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ဝါလကင်းလွတ် သီတင်းကျွ တ်ကာလမှာ လူငယ်တို့ အနေနဲ့ မိမိတို့ကြည်နူး ရင်ခုန် ဖွယ်ရာကောင်းတဲ့ ...
ပြင်ဦးလွင်ပေတဒါန(ကြောက်လန့်တက်သူများ မဖတ်ရ..) with photo
ပြင်ဦးလွင်ပေတဒါန (ကြာတော့ ကြာခဲ့ပါပြီ) .. ဗဟုသုတ အလို့ငှာ ပြန်လည်ကူးယူဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်.... ကြောက်လန့်တက်သူများ မဖတ်ရ.. ပြ...
သတင်းကိုဖတ်ပြီးတော့စိတ်မကောင်းပါဘူးသိပြီးသားသူငယ်ချင်းတွေလည်းရှိမှာပါ လောကကြီးဟာ ဆန်းကြယ်လွန်းတယ်... မရည်ရွယ်ပေမယ့်လည်း လူသားတွေကို အပြ...
ယနေ့ ခောတ်အမျိုးသမီး များ ၏ ၀တ်စား ဆင်ယဉ်မှု စတိုင်ဟန် ကို မော်ဒယ် သီရီရှင်းသန့် က ၀တ်ဆင်ပြထားစဉ် မြန်မာ နိုင်ငံ ရဲ့ အဓိက မြို့ ကြီးတွေ ဖြစ်တ...
အဆိုတော် ဆိုတေးကို အောက်တိုဘာ ၂၂ ရက် နေ့ညနေပိုင်းက သူ့နေအိမ်မှာ သွားရောက်သတင်းမေးမြန်း ခဲ့တဲ့ ဝိုင်းစုခိုင်သိန်းက” အစောကြီးကတည်းက သွား ကြည့်ဖို့ အစီအစဉ်ရှိတယ်။ သူဖြစ်ကတည်းက ဝိုင်းစုက အမေရိကသွားရတယ်။ ပြန် ရောက်တာလည်း မကြာသေး ဘူး။ပထမက မန္တလေးမှာ ပရိုမိုးရှင်းလုပ်တဲ့အခါကျရင် သွား မယ် စိတ်ကူးထားတာ။ ဒါပေမဲ့ သူကအရင်ရန်ကုန် ကိုပြန်ရောက်လာတော့ သွား ကြည့်ဖြစ်တာပါ။သူက အခြေ အနေတော်တော် ကောင်းနေ ပါပြီ။သူသေ ချာလေ့ကျင့် လိုက် မယ်ဆိုရင်လူကောင်းအတိုင်း ပြန်ဖြစ်သွားမှာပါ” လို့ပြောပါတယ်။
အောက်တိုဘာ၂ဝ ရက် နေ့က ဆိုတေးရဲ့ နေအိမ်ကို သွားရောက်ပြီး သတင်းသွား မေးရင်း အားပေးစကားပြော ပေးခဲ့တဲ့ နိုင်ဇော် (Lazy Club)က” စကားတော့ နည်း နည်း လေးပြောနိုင်လာပြီ။ အကြာ ကြီးတော့ မပြောနိုင်ဘူး။ လူတစ်ယောက်ကိုသိ တယ်။ သတိ ရတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါ တယ်ပေါ့။အဲ ဒီလောက် တော့ သူ ပြောနိုင် တယ်။ အရင်လို တော့သွက်သွက် လက်လက်ကြီး မပြောနိုင်သေးဘူး။ သူဆေး ရုံကဆင်းပြီးအိမ်ရောက်တော့ ကျွန်တော် သွားကြည့် တယ်။သူနဲ့တွေ့တော့သူ ကကျွန်ေ တာ့် ကို ကန်တော့တယ်။သူကတော့ သူ့အိမ်မှာ ဘောင်းဘီအတိုလေး နဲ့ပဲ နေတာလေ။ကလေးလေး လို ပြန်ဖြစ်သွားတယ်။ ကျွန်တော် ကတော့ သူ့ ကို အားပေး စကား တွေ အများကြီးပြောပေးခဲ့ တယ်။
ညီလေးဆိုတေး ဒီ အခြေအနေမှာ မင်းနောက်ထပ် အခွေသစ်တွေ၊ သီချင်းအသစ် တွေလုပ်ဖို့အတွက်ကို မင်းဦး နှောက်ကို အနားပေးတယ်လို့ပဲ သဘောထားပါ။အဓိက အချက် ကတော့ငွေနောက်မလိုက်နဲ့ တော့။ နေပြန် ကောင်းသွားလို့ အလုပ်ပြန်လုပ်တော့ မယ်ဆိုရင် အရင်တုန်းက အဆို တော်မဖြစ် ခင်က ကိုယ်ကြိုးစားထားတဲ့ အ ရာတွေကို ရအောင်လုပ်ပါလို့ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ဆုံးမစကား ပြောပေးခဲ့ပါတယ်။သူက ကျွန် တော့်ကိုကန်တော့တော့ စကား ပြောပေးခဲ့တာပါ။ ဒီအခွင့်အ ရေးကို အတွေ့အကြုံလို့ အသုံး ချပြီးတော့ ဒီ့ထက်ကောင်းတဲ့ သီချင်းတွေကိုဖန်တီးနိုင် အောင်ကျွန်တော်ဆိုတေးကို သူ့ အခွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်း မေးပါ တယ်။ သူပြောပြ ပါ တယ်။ ဒုတိယ အခွေအတွက် သီချင်း တွေပြီးပြီလို့ပြောပြတယ်။ပရိ သတ်တွေအနေနဲ့သူ့ရဲ့ ဒုတိယ မြောက်အခွေကို နား ထောင်ရ တော့မှာပါ။ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ သူ တီးထားအပ်ထားတဲ့ သီချင်းတွေကိုသူ့ဆီမှာ ဘယ် နှစ်ပုဒ်ရှိလဲ။ဘယ်သူ့ဆီမှာ ဘယ်နှစ် ပုဒ်ရှိလဲဆိုတာတွေကို အကုန်လုံးမှန်းပြီးသီချင်းကို ပြန်လိုက်စုပြီးသူ့ရဲ့ ဒုတိ ယ မြောက်အခွေကိုထွက်နိုင် အောင်ကြိုးစားပေးမှာပါ” လို့ပြောပါတယ်။
” ဝိုင်းစုက တစ်လပိုင်းကို အခွေထွက်ဖို့လုပ်ထားတာဆို တော့ သူမမီလောက်ဘူး ထင်တယ်။ သူနဲ့ဆိုထားတဲ့သီချင်းကို ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာ စဉ်း စားနေတုန်းပဲ။ သူ က သီချင်းဆိုဖို့လောက်တော့ အားမရှိသေးဘူး။ ဒါပေမဲ့ အခြေအနေကတော့ တအားပြန် ကောင်းသွား ပြီ။ အားလုံးလည်း သူ ပြန်မှတ်မိတယ်။ ပြောနိုင် တယ်။ သူပျော် လည်းပျော်တယ်။ အောက်တိုဘာ ၂၃ ရက် နေ့က ဆိုတေးရဲ့ နေအိမ်ကို ဟဲလေး၊ အစ္စဏီ၊ ဒီယံ၊ Wai လျှံ၊ စစ်သွေးတို့ကလည်း သွားရောက်တွေ့ဆုံ သတင်း မေးခဲ့ ပါ တယ်။ ဆိုတေးကိုသွား ရောက်တွေ့ဆုံဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဟဲလေးက ” ဆိုတေးနဲ့က သူဘာမှ မအောင်မြင်ခင်ကတည်းက ကျွန်တော်နဲ့ဆိုခဲ့ကြတယ်။ ညီတစ်ယောက်လိုပဲ။ သွားတွေ့ ခဲ့ကြတဲ့ အစ္စဏီတို့၊ Wai လျှံ တို့၊ ဒီယံတို့၊ စစ်သွေးတို့ဆို တာတစ်ဖွဲ့တည်းသားလို့ ပြော လို့ရတယ်။ မနေ့က ဝိုင်းစု နဲ့ဖုန်းရတော့ သွားကြည့် ဖြစ် တာ။ အမှန် ကတော့ ရန်ကုန် မှာ ရောက်နေပြီ လို့ကြားတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဆေးရုံမှာပဲထင်တာ။ အိမ်ကို ပြန် ရောက်ပြီဆိုတော့ အဆင်ပြေ သွားတာပေါ့။ အခုလိုမျိုး အားနည်းနေ တဲ့အချိန်မှာ သွားအားပေးတဲ့သဘောပါ။ အရင်ကတွဲလုပ်ခဲ့တဲ့ ” အဝေးရောက်ချစ်သူ” ဆိုတဲ့ သီချင်းလို ရှေ့လျှောက်သီချင်း တွေတွဲ လုပ်ကြမယ်လို့ ကျွန်တော် သူ့ ကို ပြောဖြစ်တယ်။ ” ဆိုတေး ညီလေး ငါတို့ အဝေးရောက် ချစ်သူဆိုတဲ့ သီချင်းလေး အောင်မြင်ခဲ့တဲ့။ လက်ရှိ မင်းရဲ့သစ္စာဆိုတဲ့ သီချင်းလေး လည်း အောင်မြင်နေ တယ်။ နောက် ထပ်သီချင်းတွေလည်း ဆက်လုပ်ကြမယ်။ အဓိကက ကိုယ့် ကိုယ်ကိုယ်ဂရုစိုက်၊ အင်အား တွေရှိလာအောင် အကောင်းဆုံးအနားယူ” လို့ပြောခဲ့တယ်။ အခြေအနေကောင်းပါတယ်။ ဟဲလေးဆို ဟဲလေး၊ Wai လျှံ ဆို Wai လျှံ မှတ်မိတယ်။ သူအဆိုတော်မဖြစ်ခင် ရပ်ကွက်ရှိုးလေးမှာ ကျွန်တော့်ရဲ့ “ပတ်သက်ခွင့် ပြုပါ” သီ ချင်း ကို သူနဲ့ဆိုတယ်။ အခုသူက အဲဒီရပ်ကွက်ထဲမှာ ပြောင်းနေတာ။ အဲဒါ သူ့ကို ပြန်ပြောပြတော့ အမှတ်ရတယ်” လို့ ပြော ပါ တယ်။
ကမ္ဘာ့အဆိပ်အပြင်းဆုံး သတ္တဝါစာရင်းထဲမှာ ထိပ်တန်းအဖြစ် ပါဝင်တဲ့ သတ္တဝါ တစ်မျိုးကတော့ ရွှေဖား (ရွှေအဆိပ်ဖား) (Golden poison frog) ဖြစ်ပါတယ်။
ရွှေဖား တစ်ကောင်မှ ထွက်တဲ့ ၁ မီလီဂရမ် အဆိပ်ဟာ ကြွက်ပေါင်း ၁ သောင်း သတ်လို့ ရပါတယ်။ လူဆိုရင် အယောက် ၂၀၊ ဆင်ဆိုရင် အာဖရိက ဆင် နှစ်ကောင် သေလောက်အောင်တောင် အဆိပ်ပြင်း ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ၁ ဂရမ် ရှိတဲ့ ရွှေအဆိပ်ဖား တစ်ကောင်ဟာဆိုရင် လူ အယောက် ၁ သောင်းခွဲကို သေစေနိုင်တယ်ိလုိ့ သိပ္ပံပညာရှင်တို့ တွက်ချက် လေ့ လာ တွေ့ရှိထားပါတယ်။
ဖြေဆေးလည်း တော်ရုံ ရှာလို့မရပဲ အဆိပ်မိရင် အားလုံး သေကြ ရပါတယ်။ ယင်း ရွှေဖားကသာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ တစ်မျိုးတည်းသော ကိုယ့်အဆိပ်ကို ခံနိုင်ရည် ရှိသူများ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့အဆိပ်က ဘယ် သက်ရှိ သတ္တဝါကိုမဆို သတ်နိုင်ပါတယ်။ ယင်းဖားကို စားမိတဲ့ ဘယ်သတ္တဝါမဆိုလည်း သေရပါ တယ်။ Liophis epinephelus အမည်ရ မြွေ မျိုးကလွဲလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတောင် အပြည့်အဝမဟုတ်ပဲ Liophis မြွေလည်း အခန့်မသင့်ရင် သေပါ တယ်။
ပိုပြီးတော့ ကြောက်စရာ ကောင်းတာက ယင်းရွှေအဆိပ်ဖား တွေဟာ ဆိုရှယ် ဆန်ဆန် အစုလိုက် နေထိုင်ကြသူများ ဖြစ်ပါတယ်။ အနည်းဆုံး ၄ ကောင်လောက် စုနေပါတယ်။ ပြီးတော့ သက်ရှိ ဖားတွေထဲမှာ ယင်း olden poison frog က ဥာဏ်ရည်အမြင့်ဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။ ဖားဘုရင် လို့တောင် တင်စားကြပါတယ်။ ဘယ်သက်ရှိ သတ္တဝါမှလည်း အန္တရာယ် မပေးရဲတဲ့အတွက် သူတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့ ဘုရင်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အရွယ်အစား ၅၅ မီလီမီတာလောက်ထိ ကြီးနိုင်ပြီး ရွှေရောင်နဲ့ လိမ္မော်ရောင် အဆင်းရှိတတ်ပါတယ်။ သူတို့ နေထိုင်ကျက်စားတဲ့ နေရာကတော့ အပူချိန် 26 °C ထက် မနည်းတဲ့ မိုးသစ်တော ဒေသ ဖြစ်ပြီး မြန်မာပြည် မှာလည်း တွေ့ရတတ်ပါတယ်။
အဆိပ်ပြင်းတဲ့ မြွေဟောက်တစ်ကောင်တောင် အဆိပ်တစ်ခါ ထုတ်ရင် သက်ရှိ တစ်ဦး၊တစ်ကောင်ကိုသာ သေစေပြီး ရွှေအဆိပ်ဖား ကတော့ ထောင်သောင်းမကကို သေစေပါတယ်။ အဆိပ်ထုတ်စရာမလိုပဲ သူ့ရဲ့  ခန္ဓာကိုယ်ကိုက အဆိပ်တွေနဲ့ သင်းကြိုင်နေတာ ဖြစ်ပါ တယ်။ ရွှေ အဆိပ်ဖား လျှောက်သွားတဲ့ နေရာကို တစ်ရှုးနဲ့ သုတ်ပြီး ခွေး၊ကြက်တို့ကို ရှုစေရင် ချက်ချင်းသေစေတာကိုလည်း လက်တွေ့စမ်းသပ်တွေ့ ရှိခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါ တယ်။
ဒါကြောင့် ရွှေအဆိပ်ဖား (Golden poison frog) ကို ကမ္ဘာ့အဆိပ်အပြင်းဆုံး သက်ရှိ သတ္တဝါအဖြစ် အများစု လက်ခံထားကြပါတယ်။
International မှာချပြနိုင်တဲ. မြန်မာနိုင်ငံထုတ် SEAGAME သီချင်း
Posted by အောင်သက်ခိုင် at 6:06 PM0comments
ပုရွက်ဆိတ်တွေကသခွားသီးကိုမုန်းတယ်လေ။ ဒါကြောင့် သခွားသီး အခွံတွေကိုပုရွက်ဆိတ်အိမ်(အသိုက်အအုံ)နားမှာ ချထားပေးလိုက်ပါ။
(၂) ရေခဲရေသန့်သန့် သောက်ချင်ပါသလား။
ဦးစွာ ရေနွေးပွက်ပွက်ဆူအောင်ကြိုပါ။ ပြီးရင်အအေးခံပြီးတော့ သင့်လျော်ရာ ပုလင်းထဲထည့်ပြီး ရေခဲသေတ္တာထဲ ထည့်လိုက်တော့ ရေခဲရေသန့်သန့်ရပြီပေါ့။
(၃) မှန်တွေ ကြည်ကြည်လင်လင်ဖြစ်ချင်ပါသလား။
(၄) အဝတ်အထည်တွေပေါ်မှာ ပီကေတွေကပ်နေလို့ ဖျက်ရခက်နေပါ သလား။
အဲဒီအဝတ်အထည်ကို ရေခဲသေတ္တာထဲ တစ်နာရီလောက်ထည့် ပေးပြီးနောက်မှာတော့ ပီကေတွေခွာလို့ရပါပြီ။
(၅) အဝတ်ဖြူတွေကို ဖြူဖြူစင်စင်လေး ဖြစ်စေချင်ပါသလား။
ဇလုံတစ်ခုထဲမှာ ရေနွေးပူပူထည့်ပြီးရင် သံပရာသီးတစ်စိတ်လောက် ညှစ်ထည့်ပေးလိုက်ပါ။ အဲဒီဇလုံထဲကို အဝတ်ဖြူ ၁ဝ မိနစ်လောက် စိမ်ထားပြီးမှ ပုံမှန်အတိုင်း ဆပ်ပြာတိုက်လျှော်ဖွတ်ပေးပါ။
(၆) ဆံသားတွေ တောက်ပြောင်ချင်ပါသလား။
ရှလကာရည် တစ်ဇွန်းလောက်ကို ဆံပင်အနှံ့ လိမ်းကျံပေးပြီးရင် ရေအေးနဲ့လျှော်ချလိုက်ပါ။ (ရေခဲရေ မဟုတ်ပါ)
(၇) သံပရာသီးထဲကအရည်တွေ ကုန်စင်အောင်ညှစ်ယူချင်ပါသလား။
ဦးစွာ သံပရာသီးအလုံးလိုက်ကို ရေနွေးပူပူထဲမှာ တစ်နာရီလောက် စိမ်ပါ။ ပြီးမှ အရည်ညှစ်ယူပါ။
(၈) ဂေါ်ဖီထုပ်ဟင်းချက်တဲ့အခါ အစိမ်းနံ့နံနေတာကို ဘယ်လိုဖျောက် ရမလဲ။
ဂေါ်ဖီထုပ်ချက်နေတဲ့ဟင်းအိုးထဲကို ပေါင်မုန့်အပိုင်းအစလေး ထည့်ချက်လိုက်ရုံပါပဲ။
(၉) ကြက်သွန်နီလှီးနေတုန်း မျက်ရည်မကျအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရပါ့။
ပီကေဝါးရင်း ကြက်သွန်နီ လှီးပေးပါ။
(၁ဝ) အာလူးပြုတ်တွေ မြန်မြန်နူးစေချင်ပါသလား။
မပြုတ်ခင်မှာ အာလူးရဲ့ တစ်ဖက်တစ်ချက်စီကို အခွံနွှာပေးပါ။ (အကုန်အခွံနွှာရန်မလိုအပ်ပေ)
(၁၁) အဝတ်ပေါ်က မင်စက်အစွန်းအထင်းတွေ ဖယ်ရှားရခက်နေပါ သလား။
မင်ကွက်အစွန်းအထင်းပေါ် သွားတိုက်ဆေးများများအုံပြီးနောက် အဲဒီသွားတိုက်ဆေးတွေ လုံးဝခြောက်သွေ့တဲ့အခါမှ အဝတ်လျှော် လိုက်ပါ။
(၁၂) ကန်စွန်းဥတွေ အခွံမြန်မြန်ခွာချင်ပါသလား။
ပြုတ်ပြီးစ ကန်စွန်းဥပူပူကို အိုးထဲကဆယ်ယူပြီး ရေအေးထဲ ချက်ချင်းနှစ်စိမ်ပေးလိုက်ပါ။ (ရေခဲရေမဟုတ်ပါ)
(၁၃) ကြွက်တွေကို ဘယ်လိုနှိမ်နင်းရပါ့။
ကြွက်တွေလာတတ်တဲ့နေရာကို ငရုတ်ကောင်းမှုန့် (အမည်းရောင်) ဖြူးပေးထားရုံပါပဲ။ ငရုတ်ကောင်းမှုန့်အနံ့ကြောင့် ကြွက်တွေထွက်ပြေး ကုန်ပါလေရော။
(၁၄) နှလုံးရောဂါသည်တွေ ညအိပ်ရာမဝင်ခင် ဘာလုပ်သင့်သလဲ။
နှလုံးရောဂါသည်တွေ သောက်ရေအေး တစ်ခွက် (သို့မဟုတ်) နှစ်ခွက်သောက် ပြီးမှ ညအိပ်ရာဝင်ပါ။ ဒါဆို နံနက်အိပ်ရာထ အမော မဖောက်စေတော့ပါဘူး။ (ရေခဲရေ မဟုတ်ပါ)
Posted by အောင်သက်ခိုင် at 2:17 PM0comments
ပို ၍ ထူးခြားတာက..
သမ္မတနှစ်ဦးလုံးကိုလုပ်ကြံခဲ့သူ Booth နှင့်Oswald သည်တရားရုံးမရင်ဆိုင်ရမှီ လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခြင်းခံရသည်
Posted by အောင်သက်ခိုင် at 3:44 PM0comments
Posted by အောင်သက်ခိုင် at 2:16 PM 1 comments
Miss Universe 2013 ရေကူးဝတ်စုံဓါတ်ပုံရိုက်ကူးပုံဖေါ်မူပုံ၇ိပ်များ
Posted by အောင်သက်ခိုင် at 5:28 PM0comments
မြန်မာ့ ယဉ်ကျေးမှု အနှစ်သာရ ပွဲတော်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ဝါလကင်းလွတ် သီတင်းကျွ တ်ကာလမှာ လူငယ်တို့ အနေနဲ့ မိမိတို့ကြည်နူး ရင်ခုန် ဖွယ်ရာကောင်းတဲ့ နေရာလေးတွေမှာ သီတင်းကျွတ် ကာလပုံရိပ်လေးတွေဖြစ်တဲ့ မီးရှူးမီးပန်း၊ မီးပုံပျံလေးများနဲ့ အတူချစ်သူ မိတ်ဆွေတို့နဲ့ဝိုင်းဖွဲ့လို့ လွတ်လပ်စွာဖြတ်သန်း ပျော်ရွှင်လေ့ရှိကြ ပါတယ်။ဒါ့ကြောင့် လူငယ် အဆိုတော် တွေဖြစ်ကြတဲ့ လွှမ်းပိုင်နဲ့ ထက်ထက်(Bobby Soxer) တို့ရဲ့ လူငယ်စိတ်ကူးနှင့် ပြည်သူ့ရင်ပြင်မှာ သီတင်းကျွတ် ကာလပျော်ရွှင် စွာဖြတ်သန်းပုံတွေ ကိုဖန်တီးပုံဖော်ရိုက်ကူးခဲ့ပြီး သူတို့ရဲ့သီတင်းကျွတ်လူငယ်ရင်ခုန်သံ စကားများကိုလည်းမေးမြန်းဖြစ် ခဲ့ပါတယ်။
“ငယ်ငယ်တုန်းက ကျွန်တော် မှတ်မိတာက ၇တန်းနှစ်လောက်က သီတင်းကျွတ်က တော်တော်ပျော်ဖို့ကောင်းတယ်။ ကျွန်တော်က နယ်မှာ နေတာဆိုတော့ ညနေ၆နာရီ နေဝင် တဲ့အချိန်ကစပြီး မီးရှူးမီးပန်း ဆော့ကြတယ်။ ဘောလုံးကန်တယ်။ ထုတ်ဆီးတိုးကစားကြတယ်။ အစုံပေါ့။ ပျော်စရာကြီးပါပဲ။ ရှိုးဆိုတဲ့အခါ ကျတော့ နှစ်တိုင်းက မှတ်မှတ်ရရပါပဲ။ သီတင်း ကျွတ်အကြောင်း သီးသန့်ရေးမယ် ဆိုတဲ့စိတ်ကူးတော့ ရှိတယ်။ သီတင်းကျွတ်အချိန်မှာ ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေလည်းလုပ်။ ချစ်သူရည်းစားတွေလည်း သီတင်းကျွတ်ညချမ်းလေးကို ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုပါတယ်။ သီတင်းကျွတ်မှာ လူကြီး မိဘတွေကို ကန်တော့မယ်”
“သီတင်းကျွတ် ရောက်ရင်တော့ လူငယ်ပီပီ ပျော်တယ်။ ငယ်ငယ်က ဆို အမျိုးတွေ အိမ်မှာစုပြီး မီးပန်းတွေ ဖောက်ကြတယ်။ သာမန် လူငယ်ဘဝကတော့ သီတင်းကျွတ်ဆို မီးပုံး တွေလွှတ် မီးပန်းတွေ ဖောက်ပေါ့။ အခုအဆိုတော် ဖြစ်လာတော့လည်း ရှိုးဆိုတယ်။ မိုးတွင်းရာသီဥတု စိုစွတ်တာကို သိပ်မကြိုက်လှဘူး။ ဒီလိုဆောင်းအနံ့သင်းတဲ့ ရာသီမျိုးကို ကြိုက်တယ်။ သီတင်းကျွတ်မှာ ငယ်ငယ်တုန်းက ဆိုရင်တော့ လူကြီး မိဘတွေဆီက မုန့်ဖိုးရတယ်။ အဆိုတော် ဖြစ်လာ တဲ့အခါနဲ့သာမန်လူငယ်ဘဝ သီတင်း ကျွတ်နဲ့ တအား ကြီးတော့မကွာပါဘူး။အဆိုတော်ဘဝမှာလည်း သီတင်း ကျွတ်ရှိုးဆိုပြီး တာနဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ စုပြီး မီးပန်း ဖောက် ရင်ဖောက်၊ မီးပုံးပျံလွှတ်စသတာတွေ လုပ်ဖြစ်တယ်။သီတင်းကျွတ်မှာအားလုံးကိုယ်ရောစိတ်ပါ။ ကျန်းမာချမ်း သာကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်”
Posted by အောင်သက်ခိုင် at 11:21 PM0comments
ကောင်းကင်ယံ၌ စေတီတော်ပုံပေါ်သည်ဟုဆိုကာ မုံရွာမြို့ ဗိုလ်ချုပ်လမ်းမကြီးစည်ကား
လူများဖြင့်စည်ကားနေသော မုံရွာဗိုလ်ချုပ်လမ်းတစ်နေရာ ဓာတ်ပုံ - မျိုးမင်းဦး
သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့ ည ၇ နာရီမှ ၉ နာရီအတွင်း ကောင်းကင်ယံတွင် စေတီတော်ပုံပေါ်သည်ဟုဆိုကာ မုံရွာမြို့ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း နာရီစင်အနီးနှင့် မြို့တော်ခန်းမအနီးတွင် ဖူးမြော်သူများဖြင့် စည်ကားလျက်ရှိပြီး ယာဉ်များ အသွားအလာပိတ်ဆို့သည်အ ထိ ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
““ကောင်းကင်ကတိမ်ထဲမှာ စေတီတော်ပုံကို ထင်ထင်ရှားရှား ဖူးကြရတယ်။ ဓာတ်ပုံရိုက်သူတွေရော၊ ကောင်းကင်က ဘုရားဖူးသူတွေရောကြောင့် လမ်းသွားလို့မရအောင် လူတွေက အရမ်းစည်ကားတယ်။ အများစုက နာရီစင်နဲ့ မြို့တော်ခန်းမရှေ့မှာ ကြိတ်ကြိတ်တိုးပဲ””ဟု မုံရွာမြို့၊ ရုံးကြီးရပ်ကွက် ဒေသခံတစ်ဦးက ပြောသည်။
““ဒါက အထူးအဆန်းတော့ မဟုတ်ဘူး။ ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်တစ်ခုပါ။ ပုံမှန်လည်း မိုးတိမ်တောင်တွေရှိတဲ့အခါ ဘုရားပုံပေါ်နေကျပါ။ အခုမိုးတိမ်တောင်တွေကလည်း နိမ့်နေတယ်။ ရွှေစည်းခုံဘုရားကြီးအတွင်း ရင်ပြင်တော်မှာ ဆီမီး ၉၀၀၀ ပူဇော်ပွဲက မီးခိုးမှိုင်းကလည်း တိုက်နေတယ်။
ဆိုဒီယမ်မီးကြီးတွေနဲ့ ဘုရားကိုပူဇော်ထားတာ ဆိုတော့ စေတီတော်ရဲ့အရိပ်က တိမ်းတိုက်နဲ့နီးတော့ ပုံရိပ်ပေါ်တဲ့ဖြစ်စဉ်ပါ။ သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့ညမှာဖြစ်တာဆိုတော့ အထူးအဆန်းဖြစ်ပြီး တစ်လမ်းလုံးပြည့်သွားတာဖြစ်ပါတယ်””ဟု မုံရွာမြို့ မြို့မိမြို့ဖတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့ညတွင် မုံရွာမြို့ပေါ်ရှိ စေတီပုထိုးများတွင် ဘုရားဖူးများဖြင့် စည်ကားလျက်ရှိပြီး ဆီမီးပူဇော်ကြသူများ ဗြောက်အိုး၊ မီးရှူးမီးပန်းပစ်ဖောက်သူများဖြင့် မြို့ပေါ်လမ်းမကြီးများတွင် စည်ကားခဲ့သည်။
ည ၇ နာရီခန့်မှ ည ၉ နာရီ ခန့်အထိ မိုးကောင်းကင်တွင် စေ တီတော်ပုံသဏ္ဌာန်ဖြစ်ပေါ်နေသည့် သတင်းများကြောင့် မြို့ပေါ်လမ်းမကြီးအချို့တွင် ဖူးမြော်သူများဖြင့် စည်ကားခဲ့ပြီး ည ၉ နာရီနောက်ပိုင်းတွင် ကောင်းကင်ယံမှ စေတီပုံသဏ္ဌာန် ပျောက်
ကွယ်သွားကြောင်း မုံရွာမြို့ ကောင်းကင်ယံတွင် စေတီတော်အား ဖူးမြော်သူများပြောပြချက်အရ သိရသည်။
Posted by အောင်သက်ခိုင် at 7:34 AM 1 comments
Labels: ထူးဆန်းထွေလာ, သတင်း